နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ မူဝါဒဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် တက်ရောက်လာကြသည့် စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံမှ ပြည်တွင်း/ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြိုဆိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခင်းအကျင်းမြင်ကွင်းများကိုသိရှိပြီး ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံး ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အရေးပါသည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထဝီအနေအထား အရ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိနေပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် ဈေးကွက်စီးပွားရေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေလိုကြောင်း၊ ယခုဆွေးနွေးပွဲ သည် အားလုံးကိုအကျိုးများပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေရရှိစေပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လာချင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံ ခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့နှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကုန်သည် စက်မှုအသင်းချုပ်၏ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကို အထူးအသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသစ်တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုလွယ်ကူမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း၊ အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လက်လီကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြေလျော့ခြင်း၊ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံခြားသား ၁ဝဝ% ပိုင်တဲ့ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပြီး၂ဝ၁၇ခုနှစ်တွင် Star Reformer Award ကိုအပ်နှင်းပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာတဲ့ ကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းရန်လိုကြောင်း၊ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့ နယ်ပယ်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် ကြီးမားသည့် အခွင့်အလမ်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားနိုင် ကြစေလိုကြောင်း၊ ယခုအချိန်ဟာ မိမိတို့အားလုံးရဲရင့်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီး ထားရမည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာတွင် Invest Myanmar Summit 2019 သို့တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များအား နွေးထွေးစွာကြိုဆို ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင် ကြွရောက်ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေ့ရှုသောအတွေးအမြင်သစ်များနှင့် တက်ကြွသည့်ခွန်အားတို့ကို ပေးစွမ်းသဖြင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဤပွဲကြီးဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက် အဘက်ဘက်မှကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါသော နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ငွေကြေးအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူအင်အားဖြင့်လည်းကောင်း ပံ့ပိုးကြသောကုမ္ပဏီများနှင့် အတူရည်မှန်းချက်ကြီး (၂) ရပ် ပြည့်မြောက်အောင်မြင်ရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ပထမရည်မှန်းချက်သည် ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်ကြီး၏ နှစ်တစ်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုယ်စားပြု စီးပွားရေး မြှင့်တင်သည့် အမြင့်မားဆုံး အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု အဖြစ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အတူ လက်တွဲဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာယခု IMS ပွဲကြီးတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင့်သုံးနေသော နည်းဥပဒေများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အခြားဆက်စပ်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းမှ အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် များရရှိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်နေရာ တည်းတွင်ရရှိနိုင်စေရန်၊ MSDP ကိုအထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်သော လျာထားစီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
MSDP အကောင်အထည် ဖော်ရန် ရေးဆွဲထားသော “Project Bank” သည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို အရည်အသွေးမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စီပွားရေးနှင့်လူမှုရေးနယ်ပယ်ကဏ္ဍ အသီးသီးတို့တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူ ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်အား ဖန်တီးရာတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ တက်ရောက်လာကြ သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများ မိမိတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသော တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းများဖြင့် ရွှေရောင်လွှမ်းအနာဂတ်သို့ လှမ်းတက်နိုင်ကြပါရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဌ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဦးဇော်မြင့်မောင် မှမန္တလေးတိုင်းအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို တင်ပြရာတွင် အခွင့် အလမ်းများ ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ Willingness and Political Commitment on Development Myanmar သည်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသည်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သလို စီးပွားရေးကိုချန်ထား၍ မရကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်အချက်အချာကျသောနေရာဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းသည် မြန်မာ ပြည် ၏အချက်အခြာကျသောနေရာတွင် တည်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သို့ ကားလမ်းမှ ဖြစ်စေ၊ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရေကြောင်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်စေ ကုန်သွယ်နိုင်သည့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ ကုန်းလမ်းဖြင့်ကုန်တင်သွင်းပါက မန္တလေးကိုဖြတ်သန်း၍ လိုအပ်သောဒေသများသို့ ပို့ဆောင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာမှ၎င်း၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ၎င်း၊ အရေးပါသည့်နေရာ ဒေသများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
အဓိကထွက်ကုန်မှာ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များဖြစ်ပါကြောင်း၊ Food safety program ဖြင့်နိုင်ငံခြား တင်ပို့ကုန်များကို အဆင့်မှီပိုးမွှားကင်းစင်တင်ပို့နိုင်ရန် စားသောက်ကုန်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဈေးကွက်တင်ပို့နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများလည်း ရှိနေသေးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေလိုကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းပေါင်း (၇ဝ) ခန့်ကို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအင်လုပ်ငန်းနှင့်အခြား Information Technology တို့ပါဝင်ပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမရှိသေးကြောင်း၊ Capacity building သင်တန်းများနှင့် Post harvest သင်တန်းများကိုရရှိ ထားကြသဖြင့် တောင်သူများသည် စိုက်ပျိုးစက်ကိရိယာများနှင့် သီးနှံဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကို နားလည်ကြပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များရှိသော ဒေသဖြစ်သဖြင့် Ancient City Tourism ကို ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ အင်းဝတို့ကို လာရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း၊ ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပေါင်း (၃ဝ၃)မျိုးခန့်ရှိပါကြောင်း၊ Culture Tourism လုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း၊ Eco Tourism အတွက်ပုပ္ပါးသည်ကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်သလို Geological Park အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လည်းစီစဉ်နေပါကြောင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ MSME (၅ဝ,ဝဝဝ) ကျော်ခန့်ရှိပါကြောင်း၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့ကောင်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ် နေကြောင်း၊ စားသောက်ကုန်များကို value added လုပ်ဆောင်တင်ပို့နိုင်ပါက ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သာတင်ပို့ခြင်း ထက်များစွာသာလွန်နိုင်ကြောင်း၊ ရံပုံငွေတခုတည်းမဟုတ်ဘဲ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပါပါဝင်ပါက တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ သေချာပါကြောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP ကို (၁၁%) ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူဦးရေ ၁.၄ ဘီလျံခန့်ရှိပြီး စာတတ်မြောက်မှု (၉၃%) ရှိပါကြောင်း၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၆၈%သည် Working Force ဖြစ်ပါကြောင်း Vocational Training များလည်းပေးနေသဖြင့် Human Capital ကောင်းမွန်စွာ ရှိပါကြောင်း၊ Investor များအတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရများက Friendly Environment ရအောင်ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ အစိုးရနှင့်မန္တလေးမြို့သာစက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် PPP Development Master Plan ကိုရေးဆွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြို့သာစက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်နှင့် ဆီမီးခုံ ဧရာဝတီဆိပ်ခံစီမံကိန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ရေတိုအကျိုးရလဒ်အဖြစ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များရရှိလာစေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်များ အဖြစ် ရေလမ်းကြောင်းအသုံးပြုနိုင်သော ခေတ်မှီစက်မှုဥယျာဉ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ကောင်းမွန်သည့် လူနေမှုဘဝပုံစံနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ မြို့သာတွင်တည်ဆောက်ထား သော Golf ကွင်းနေရာသည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Sport Tour လာသူများကို Cultural Tour and Ancient City Tour များပါ promotion လုပ်နိုင်ပါကြောင်း၊ ၂ဝ၄ဝ ခုနှစ်ထိ ဂျပန်နှင့်ပူးပေါင်း၍ Master Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေသော New Mandalay Resort ကိုစီစဉ်နေကြောင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြေလျော့ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိမှုများ လည်းရှိသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/dhyVZ
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တင်ပြချက်များကိုအပိုင်း (၄) ပိုင်း ခွဲ၍တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယ အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးဦးတင်မောင်မြင့်မှ International Standard Industrial Zone နှင့်မိတ်ဆက်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ New Yangon Development Company Limited မှ ဒေါ်အေးအေးခိုင် (Head of City Planning and Development) မှစီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားပြောကြားခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ Yangon Metropolitan Development Public Company Limited ၏ Executive Director ဦးသူရိန်အောင် မှ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အချက်များပြောကြားခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။
တင်ပြချက် များတွင် ရန်ကုန်မြို့သည် မြို့ပြအမွေအနှစ်များဖြင့် စိမ်းလန်းပြီးနေချင်စဖွယ်ကောင်းသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးမျှော်မှန်းချက် (၅) ချက်ဖြစ်သည့် (၁) ကုန်စည်များကူးသန်း ရောင်းဝယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ (၂) စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (၃) မြို့ပြသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး (၄) မြို့ပြ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် (၅) လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့ ပါဝင်ပါကြောင်း၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့်အထူးစီးပွားရေးဇုန်များသည် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေ ရန်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ တိုးတက်လာ စေရန်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေစီးဝင်မှု အားပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် တို့အတွက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ရေကြောင်းဆိပ်ကမ်းအသုံးပြုရန်နေရာ (၉)ခု ရှိသည့်အနက် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း သည် ၉ဝ% သောတင်သွင်း၊ တင်ပို့ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနေသည့် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိအသုံးပြု နေသည့် ဆိပ်ကမ်းများမှာ မြို့ပြလူနေအိမ်များနှင့်နီးကပ်နေသောကြောင့် ချဲ့ထွင်ရန်မလွယ်ကူသော်လည်း အသစ်တည်ဆောက်မည့် Elephant Point သည်ရေစူးနက်သည့် နိုင်ငံတကာ ပြည်ပကုန်သွယ်သဘောင်္ကြီးများ (Megaships) ဝင်ထွက်သွားလာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ သရက်တောကျေးရွာတွင်လည်း စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဘက်စုံသုံး ဆိပ်ကမ်းသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းရှိကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိစက်မှုဇုန် (၂၉) ခုအား အဆင့်မြှင့်တင်သွားရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ မြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီစက်မှုဇုန်များ ထူထောင်ခြင်းဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရရှိလာမည့် ဝင်ငွေများကို မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပြန်လည်သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရန်ကုန်ယာဉ်လိုင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ကုန်းလမ်း တွင်မြို့ပတ်မီးရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး အတွက် Yangon Water Bus ကိုပြေးဆွဲပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းများအနေဖြင့် ထပ်မံ တိုးချဲ့မည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများလည်းရှိပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်၊ သွယ်တန်း၊ ဖြန့်ဖြူးရေးကို သင့်လျော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်မည့် လုပ်ငန်းများကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းများတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်များကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာစီမံကိန်း၊ convention center နှင့် other infrastructure စီမံကိန်းများမှာအလားအလာကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားသွားပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/rvL12
ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် မှ ကရင်ပြည်နယ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သော အခွင့်အလမ်း များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ကောင်းမွန်သောမြေဆီ၊ သာယာလှပသောတောတောင်နှင့် ရှေးဟောင်း ဘုရားများစွာတည်ရှိပြီး အဖိုးတန်သတ္တုများထွက်ရှိသလို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိပါ ကြောင်း၊ အမှတ်(၁)အာရှလမ်းမကြီးနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ (ဒါနန်းအထိဆက်သွယ်ထားသော) အရှေ့အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံပေါ်မှာရှိပါကြောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်လူဦးရေ၏ ၅၀% မှာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ဆောင်ရွက်နေကြ ပြီး စိုက်ပျိုးမြေအသုံးချမှု ၁၆% သာရှိကြောင်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းဧက (၃)သန်းကျော်ရှိပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး ထွက်ကုန်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်ပိုးရန်၊ အခြောက်ခံရန်နှင့် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာ ကားလမ်းကိုသာ အဓိကထား အသုံးပြုနေပါ ကြောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးအတွက် စရိတ်သက်သာစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကို ကြိုဆို ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မကြာမီရရှိရန်မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန် ဖားအံနှင့် မြဝတီတို့တွင် စက်မှုဇုန်များတည်ထောင်ထားကြောင်း၊ ဒေသတွင်းအေးချမ်းပြီး ခရီးသွားလာ မှုများမြင့်တက်လာနေကြောင်း၊ ဒေါနတောင်တန်းမှ ခရမ်းစွဲကျောက်နှင့် ခနောက်စိမ်းတို့မှာ တန်းဝင် ကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
၂ဝ၁၅ မှစတင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ မြဝတီကုန်သွယ်မှုဇုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေးဇုန်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အတွင်း အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင် ရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် တန်ဖိုးမြှင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စက်မှုနှင့်အခြေခံ အဆောက်အဦးများ တွင် နည်းပညာမြင့်မားသောအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ သတ္တုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင် လိုအပ်သောတည်ထောင်မှုများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ် ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲစေမှာဖြစ်သောကြောင့် Business for Peace ဆိုသည့်စကားအတိုင်း ကရင်ပြည်နယ်တွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေလိုကြောင်း၊ ပြဌာန်းထားသော အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များလည်း ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် လိုအပ်သည့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/jrDS1
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဒေါ်လဲ့လဲ့မွန် မှ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို ပြောကြားရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို အဓိကအားထားဆောင်ရွက်ရာ ရော်ဘာ၊ ဆီအုန်း၊ ကွမ်းသီး၊ သီဟိုဠ်တို့ စိုက်ပျိုးထွန်းကားပါကြောင်း၊ ဒူးရင်းစိုက်ပျိုးရေးကို ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ သတ္တုကဏ္ဍတွင် ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်၊ ခနောက်စိမ်းနှင့် ရွှေထွက်ရှိပါကြောင်း၊ ထားဝယ်စက်မှုဇုန်ကို Phase I ကို ITB နှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးစာချုပ်အရ Phase I ပြီးမှသာ Phase II ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိတွင် Phase I and Phase II ကို တပြိုင်တည်းဆောင်ရွက် နေကြောင်း၊ Phase II ကိုမြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့်ဂျပန်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထားဝယ် စက်မှုဇုန်သည် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Southeast Corridor ဖြစ်သည့်အတွက် လာရောက်လေ့လာ ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထီးခီးဒေသရှိစက်မှုဇုန်သည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် မကြာမှီဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးသည် ပင်မဓါတ်အားလိုင်း လုံးဝမရရှိသေးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို လာရောက်ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ပုလဲမွေးမြူရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာထွက်ရှိသော ရွှေရောင်ပုလဲမွေးမြူခြင်းလုပ်ငန်း၊ ငှက်သိုက် လုပ်ငန်းတို့ကို လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း၊ ကော့သောင်ခရိုင်တွင် ကျွန်း (၆ဝဝ)ကျော်ရှိပါကြောင်း၊ သဘာဝ အလှတရားထူးခြားစွာရှိသဖြင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ Resort လုပ်ငန်းများကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းများကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ လေဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်များရှိနိုင်သလို တန်ဖိုးမြှင့်ရေထွက်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ကိုလည်းအားပေးလိုကြောင်း၊ DIC ၏နည်းဥပဒေအရနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂ဝ)ဦးက ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ လုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ရန်အမြဲအဆင်သင့် ရှိပါကြောင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာထူးခြားသည့် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာကြီးမားသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအလွန်နဲပါးကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော နေရာများရှိသကဲ့သို့ အက်ဒမန် ပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်း၍လည်း ရောက်ရှိနိုင်သဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားသာပါကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Presentation link - shorturl.at/vC247
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှဒေါ်တင်တင်ထူး (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်)မှ Investment Opportunities in Ministry of Industry အကြောင်းပြောကြားရာတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအရ Directorate of Industrial Collaboration, Directorate of Industrial Supervision & Inspection, Heavy Industrial Enterprise No.1, No.2 and No.3 နှင့် Myanmar Pharmaceutical Industrial Enterprise ဟုအဓိကဌာနကြီး (၆)ခုရှိကြောင်း၊Directorate of Industrial Collaboration ဌာနသည်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေဆိုင်ရာများ၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်တင်သွင်း၊ တင်ပို့ကုန်များအတွက် ဓါတုကင်းစင်ထောက်ခံချက်များလုပ်ဆောင်ကြောင်း၊ Industrial Supervision and Inspection ဌာနမှ အသိပညာဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ SME လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး အတွက်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဆိုင်ရာ လိုက်နာကျင့်သုံးရန်အချက်များ၊ လျှပ်စစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရေနွေးငွေ့များကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးချစေရေး တို့ကိုဂရုစိုက်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအမှတ်(၁)သည် မြင်းကောင်ရေ ၂၂၀၀ အားရှိအကြီးစား ဒီဇယ်အင်ဂျင်သုံး စက်ရုံများ၊ သံ၊ သတ္တုပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယာဉ်များနှင့် မြေသယ်ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းကိရိယာ ထုတ်စက်ရုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာစက်ရုံများ (ဆန်စက်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊ ရေတင်စက်) ကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်း၊ အကြီးစားစက်မှု(၂)သည် တာဘိုင်များ၊ နေရောင်ခြည်သုံး၊ LED၊ စွမ်းအင်ထုတ်စက်ရုံ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ၊ ရာဘာအခြေခံထုတ်စက်ရုံများ လည်ပတ်နေကြောင်း၊ အကြီးစားစက်မှု (၃)တွင်စတီးဝါယာနှင့် ပလတ်စတစ်စက်ရုံ (၁)ရုံ၊ စက္ကူစက်ရုံ (၂) ရုံနှင့်ခြည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ (၁၄) ရုံ ရှိပါ ကြောင်း၊ ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်သစ်ဆိမ့်ဆီထုတ်စက်ရုံ၊ သိုးနှင့်မြင်းထုတ်ကုန်၊ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး၊ အသဲ ရောင်ဘီကာကွယ်ဆေး စက်ရုံများနှင့်ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းစက်ရုံများရှိပါကြောင်း၊ Myanmar Sustainable Development Plan မှစီးပွားရေးတည်တံ့ခိုင်မာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်စေရေး၊ လူ့စွမ်း အားအရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုအလေးထား ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စားသောက်ကုန်ကဏ္ဍမြှင့်တင်နိုင်ရေးတွင် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် သွင်းကုန် အစားထိုးလုပ်ငန်းများအပြင် ပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေးကိုပါ ဆောင်ရွက်ရန်၊ နည်းပညာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုရရှိရေး၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ကြံဆခြင်းတို့ကို အားပေးခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် စက်မှုထုတ်ကုန်များ ဖြစ်စေရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများကို စနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိရောက်အကျိုးရှိ စေခြင်းတို့ကို ရည်မှန်းဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ Project Bank တွင်တင်ပြထားပြီး အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေသော စီမံကိန်းများမှာ ကယားပြည်နယ်-လွိုင်ကော်၊ မွန်ပြည်နယ်-မုဒုံ၊ ချင်းပြည်နယ်-ပလက်ဝတို့ရှိ သင်တန်းကျောင်းများ၊ မန္တလေးရှိ Youth City Project, Mini off-grid solar system, EV charging station နှင့် Micro hydro turbines များဖြစ်ကြောင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော အခြားစီမံကိန်းများလည်း ရှိပါသေးကြောင်း၊ အချုပ် အားဖြင့်ဆိုရသော် မြန်မာနိုင်ငံသည်စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များစွာလုပ်နေပြီး လုပ်ခလစာ သက်သာသော လုပ်သားဝန်ထမ်းများရရှိနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတပေါ များသော နိုင်ငံဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိကြောင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍတွင် responsible investment များလာရောက်ပြုလုပ်ကြရန် နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/jUZ69
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေး၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်အေးသိန်း မှ ရခိုင် ပြည်နယ်ရှိ အဓိကဒေသကြီး (၅)ခုမှာ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ မောင်တော၊ ကျောက်ဖြူနှင့် သံတွဲတို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအဆင့်မြှင့်တင်နေသော စီမံကိန်းများမှာ ကျေးတော-မင်းဂံ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်၊ မြောက်ဦးမြို့သစ်စီမံကိန်း၊ မြောက်ဦးလေဆိပ်စီမံကိန်း၊ ငပလီလေဆိပ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် မာန်အောင်ကျွန်း Eco Tourism ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများဖြစ်ပါကြောင်း၊ မာန်အောင်ကျွန်းတွင် ဧက ၄၇.၈၉ ကို Phase I အဖြစ်၂၀၁၉-၂၀၂၃ အတွင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအနေဖြင့်ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေကြောင်းလမ်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် စစ်တွေလေဆိပ်၊ ကျောက်ဖြူလေဆိပ်၊ သံတွဲလေဆိပ်၊ အမ်းလေဆိပ်၊ မာန်အောင်လေဆိပ်တို့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်၊ ရေကြောင်းလမ်းဖြင့်နတ်မြစ်၊ ကုလားတန်မြစ်၊ လန်ရိုမြစ်နှင့်မေယုမြစ်ကြောင်းတို့မှ လာရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မင်းဘူး-ပဒန်-အမ်း၊ ရန်ကုန်-ပြည်-တောင်ကုတ်၊ ရေကြည်-ငသိုင်းချောင်း-ဂွကားလမ်းများလည်း ပေါက်ရောက်ကြောင်း၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှုများကို စစ်တွေဆိပ်ကမ်း၊ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းနှင့် သံတွဲဆိပ်ကမ်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များအတွက်ဒေသ၏ အဓိကစီးပွားရေးများဖြစ်သော မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် နှင့် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်လည်း ၁ဝဝ% ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားအနည်းဆုံးဒေသများစာရင်းတွင် ပါဝင်သဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလဲ (၇)နှစ်တိတိ ရရှိနိုင်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/ntDEM
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအေးဇံ မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိတ်ခေါ်လိုသည့် စီမံကိန်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြား ရာတွင် Development Zone (၃)ခုခွဲခြားထားပြီး ကဏ္ဍများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ စသည်ဖြင့်ရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်းများတွင်သထုံခရိုင်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊ စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံမြေဧရိယာအတွင်းရှိ ကိုရီးယားစက်မှုဇုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ထိုစီမံကိန်းတွင်မြေဧရိယာ၊ လုပ်သားအရင်းအမြစ်၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ လမ်းအစရှိ သည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများအဆင်သင့်ရှိနေကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှာ ၂၄ နာရီ ဗို့ဒ်အားအပြည့်ဖြင့် လုံလောက်စွာရရှိသည့်အပြင် ပိုလျှံနေသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကို ရန်ကုန်တိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ရသောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးအနေဖြင့် စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများအနေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ အဆင့်မြင့်အိမ်ယာအဆောက်အအုံများ၊ ရောင်းဝယ်ရေးစင်တာများ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် လာရောက်မြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခြင်း၊ မြေငှားရမ်းခသက်သာခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နီးကပ်နေသော ကြောင့် လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများ ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့် လျှင်မြန်စွာရရှိနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးစင်္ကြံနှင့် နီးကပ်သောကြောင့် ကုန်သွယ်မှု အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နည်းပါးခြင်းတို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ခြင်း ရာဘာကုန်ကြမ်းများစွာလည်းရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင်ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားတောင်ခြေရှိ ကင်ပွန်းစခန်းမှ (၃) မိုင်အကွာတွင် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဇုန်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပြီး ကျိုက်ထိုမြို့နှင့် (၂)မိုင်အကွာတွင်လည်း ကျိုက်ထို Resort City တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
တံတားအသစ် တစ်စင်းတည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ရန်ကုန်မြို့မှကျိုက်ထိုမြို့သို့ (၁)နာရီအတွင်း ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ရုံးပိတ်ရက်များ တွင်လာရောက်လည်ပတ်အပန်းဖြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ရေးမြို့မြောက်ဘက် သပြေရွာ အနီးရှိကုလားကုတ်ကျွန်းတွင်လည်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တစ်ခုတည်ဆောက် နိုင်ကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်သည် (၂၂၅) မိုင်ပင်လယ်ပြင်နှင့် ထိစပ်နေပြီး (၁၂၅) မိုင်မှာ ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း များအတွက် ရှားပါးငှက်များကိုလည်း လာရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ကြောင်း၊ စက်စဲကမ်းခြေတွင်လည်း လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ ကဗျာဝကမ်းခြေမှာလည်း ကျောက်ပုစွန် လုပ်ငန်းဖြင့် နာမည်ကြီးပါကြောင်း၊ Fishery Zone အတွက် ကုလားကုတ်ကျွန်း၊ အစင်နှင့်အဘော် ကျေးရွာကြားတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နေရာကောင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ကွက် (၁၄) ကွက်ရှိပါကြောင်း၊ သပြေရွာအနောက်ဘက်တွင်လည်း Oil & Gas Terminal တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် MIC ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရနှင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပူးပေါင်းပြီး အကောင်းဆုံးပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုဆိုပါကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/jnJQT
စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်မှ ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးအမြတ်များနှင့် အားသာချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးတိုင်းဖြစ်ပြီး လုပ်သားအရင်းအမြစ် ပေါများကြောင်း၊ နည်းဗျူဟာအရအချက်ကျသောနေရာဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်သယံဇာတမျိုးစုံ ထွက်သောဒေသလည်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်သည့် တမူး-မိုရေး နယ်စပ်ဂိတ်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် (၈)လပိုင်း တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောကြောင့် နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတိုးတက် ခဲ့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည် အေးချမ်းတည်ငြိမ်သောဒေသတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍအနေဖြင့်ကြည့်လျှင် မြေလွတ်မြေရိုင်းများပေါများခြင်း၊ ရာဘာ၊ လက်ဖက်၊ ကော်ဖီ၊ လျှော်ဖြူ စသည်တို့ကို လည်းစိုက်ပျိုးနိုင်ကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၏အဓိကထွက်ကုန်များဖြစ်သော ပဲ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ စပါး၊ ဖရဲ၊ သခွား၊ သရက်စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်ကြောင်း၊ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် သိုး၊ ဆိတ်၊ ကျွဲ၊ နွားများ မွေးမြူပြီး အသား စက်ရုံများ၊ အစာစက်ရုံများ၊ စည်သွတ်ဘူးစက်ရုံများ၊ နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင် ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စက်မှုဇုန်အနေဖြင့်စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ကလေးအစရှိသည်ဖြင့် စက်မှုဇုန် (၄) ခုရှိပါကြောင်း၊ မန္တလေး နှင့်နီးသော စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်တွင်လည်း မြေလွတ်များရှိသေးကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးအနေဖြင့်လည်း ၂ဝ၁၉ အောက်တိုဘာတွင် ကချင်ပြည်နယ် တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်မှ ၂၄ဝ မီဂါဝပ် အထိ ရရှိမှာဖြစ်သောကြောင့် ပူပင် စရာမလိုကြောင်း၊ အခြားလိုအပ်သောအခက်အခဲများကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီးမှ တာဝန်ရှိသူများမှကူညီ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့နှင့်မုံရွာမြို့များတွင် ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများတွင်လည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် မြင်းမူနှင့်ကသာမြို့များတွင်လည်း ဆိပ်ကမ်းနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့်လမ်း၊ တံတား များဖြစ်သည့် ရေဦး-ကလေးဝလမ်း၊ မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါ-ကလေးလမ်း၊ ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းစသည်တို့ကို BOT စနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ သက်ကယ်ရက်-ဖောင်းပြင်-ဟုမ္မလင်း-ခန္တီးလမ်းမှာ သွားလာမှုနည်းနေသေး ကြောင်း၊ ဖောင်းပြင်မှတဆင့် ပင်လယ်ဘူး ထိုမှတဆင့် ကချင်ပြည်နယ်အထိ သွားနိုင်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ် လုပ်ငန်းအနေဖြင့် National Grid နှင့်ဝေးသောချင်းတွင်းဒေသများတွင် Solar နှင့် Hydro Power ဖြင့် လျှပ်စစ် မီးပေးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ကလေးဝ တွင်ထုံးကျောက်တောင်များရှိပါကြောင်း၊ မော်လိုက်-ကလေးဝတွင် ကျောက်မီးသွေးများရှိကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ခရီးသွားကဏ္ဍအနေဖြင့် Package (၆)ခုခွဲထားပါကြောင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာ၊ ကသာ၊ ကလေး၊ ခန္တီးဟူ၍ ခွဲထားပါကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင မပျက်စီးသေးသော တောတောင်ရေမြေ၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များစွာရှိသည့်အပြင် တံတားဦးလေဆိပ်နှင့်လည်း မိနစ်၂ဝ ခန့် သာဝေးသော နေရာတွင် ရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်လိုကြောင်း၊ အာရှနှင့်အရှေ့တောင် အာရှကို ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် မကြာမီတွင် လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည့်ဒေသဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Frontier Market ဖြစ်သော ကြောင့် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုကြောင်း၊ သိရှိလိုသည်များကိုလည်း မိမိတို့ဘက်မှ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားသွားပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/CIO14
ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင ချင်းပြည်နယ်ရှိလူဦးရေ၊ မျိုးစုံကွဲပြားသော အဖိုးတန်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလားအလာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် မက်လုံးပေးမှုများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် သဘာဝအတိုင်းရှိနေသော အလှအပများ အကြောင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါက ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (၇)နှစ် ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်လျက်ရှိသော ကဏ္ဍများအနေ ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လာရေးကဏ္ဍ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သွယ်တန်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း) နှင့်သတ္တုကဏ္ဍ စသည်တို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ ချင်းပြည်နယ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသောကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ “Act East Policy” အရ ချင်းပြည်နယ်၏ ပထဝီစီးပွားရေး အနေအထားကိုမြှင့်တင်သွားနိုင်ကြောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်သည် ခိုင်မာသောဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် နီးစပ်နေသောကြောင့် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများလည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေလိုကြောင်း၊ “Kaladan Multi-Modal Transit Project” သည် ချင်းပြည်နယ်အတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံတစ်ခုဖြစ် သောကြောင့် ၄င်းစင်္ကြံကိုအခြေပြု၍ အကျိုးအမြတ်များရရှိအောင် ပြုလုပ်ပြီး ချင်းပြည်နယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေခြင်းကို လျော့ချသွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလားတန်မြစ်ကူးတံတားပြီးစီးပါက ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စသည်တို့မှ ကုန်စည်များကို ပလက်ဝမှတဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းသို့ အလွယ်တကူ ပို့ဆောင်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ဝါးနှင့်သရက်သီးစိုက်ပျိုးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့နယ် နတ်မတောင်ဒေသတွင်လည်း သဘာဝအခြေပြုခရီးသွား လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်း၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် (၇) လုံးခန့်ဆောက်လုပ်ထားပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်နေသော သစ်ခွပန်းနှင့်တောင်ဇလပ်ပန်းများကို ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် မျိုးစပ်ခြင်းများလုပ်ငန်းတွင်လည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေလိုကြောင်း၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ကဏ္ဍအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ဖလမ်းတွင် တည်ဆောက်နေသော လေယာဉ်ကွင်းပြီးစီးပါက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများလည်း ပိုမို ကောင်းမွန် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သောမြစ်၊ ချောင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သော ရေခံ မြေခံရှိပါကြောင်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် ခရိုမိုက်၊ နီကယ်နှင့် ကြေးနီများ ထွက်ရှိသော ကြောင့် ထိုသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်း၊ တီးတိန်၊ တွန်းဇံနှင့် ဖလမ်းမြို့နယ်တို့တွင် ပိုးတောင်သူများမှ တပိုင်တနိုင်ပိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများရှိကြောင်း၊ ပိုးအ်ိမ်မှပိုးချည်၊ ပိုးချည်မှအထည်ရက်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာမှာထင်ရှားသော ချင်းရိုးရာအထည်များကို ရက်လုပ်တင်ပို့နိုင်ကြောင်းတို့ကို ပြောကြားရှင်းလင်းပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ဓာတ်မြေသြဇာမသုံးသော Organic Farm များစိုက်ပျိုးနိုင် ပါကြောင်း၊ Eco-Tourism လုပ်ငန်းမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် အလားအလာရှိသော ကဏ္ဍ (၄)ခုမှာ ရေအားနှင့်လေအား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအခြေပြုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအသုံးမပြုသော စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် ရိုးရာရက်ကန်းလုပ်ငန်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မြို့ပြဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် နွားနောက်မွေးမြူခြင်း၊ စည်သွပ်ဘူးလုပ်ငန်း၊ နိုင်ငံတကာသို့တင်ပို့ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/jmuGY
ဧရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် ပထမဦးစွာ ဧရာဝတီတိုင်း၏ တည်နေရာ၊ နယ်နိမိတ်၊ အကျယ်အဝန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏အခြေအနေများ၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအမံများ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မှုအခြေအနေများ၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ၏အခြေအနေများ၊ ငါးပုစွန်မွေးမြူထားရှိမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ၊ ဂဏန်းပျော့မွေးမြူ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းများအနေဖြင့် စီးပွားရေးဇုန်များအနေဖြင့် Pathein Industrial City, Maubin Industrial Park, ငရုတ်ကောင်းဒေသတွင် Petrochemical Complex၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်အကြီးစားစီးပွားရေးဇုန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အပန်းဖြေလုပ်ငန်းဇုန်စသည်တို့ရှိကြောင်း၊ Coastal Road စီမံကိန်းအခြေအနေနှင့် Coastal Road တလျှောက် ရှိ စီမံကိန်းများတွင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့် ငွေဆောင်နှင့်ချောင်းသာကမ်းခြေစီမံကိန်းများနှင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းစီမံကိန်း၊ Tazin စီမံကိန်း၊ ရွှေသောင်ယံ ကမ်းခြေစီမံကိန်း၊ Supreme LNG ၏ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်း၊ Mata စီမံကိန်း၊ Bomie စီမံကိန်းနှင့် ဂွစီမံကိန်းများအကြောင်း ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
အနောက်ဘက် စီးပွားရေးစကြံတွင်ထင်ရှားသောဇုန်များအနေဖြင့် Oil & Gas Hub, Maritime Industrial Hub, Danson Port Industry, Danson City, Tourism, Pathein Industrial Hub နှင့် Pathein International Airport စသည်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်စီစဉ်ထားပါကြောင်း၊ Micro Grid Electrical Power Generation စီမံကိန်း၊ မီးလင်းဂျိုင်ဒေသ LNG လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မှုအခြေအနေ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများနှင့် မော်တင်စွန်းဒေသ ကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/CRS29
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လွင်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အချက် အလက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် မိမိအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သော Investment Fair တစ်ခုတွင ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ဖူးပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည်အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိပြီး ရှမ်းမြောက်၊ ရှမ်းတောင်၊ ရှမ်းအရှေ့တွင် မဖွံ့ဖြိုးသေးသောနေရာများစွာရှိသေးကြောင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများစွာရှိပြီး တရုတ်၊ ထိုင်း၊ လာအိုနိုင်ငံတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောကြောင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
သို့သော် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များသောကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျရသော အကြောင်းများရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ လက်နက်ကိုင်ရခြင်းမှာလည်း ဆင်းရဲသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအရာကို ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြင့် ကုစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအစိုးရသက်တမ်းတွင် ယခင်ကမတွေ့ရှိရသော လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး စသည်တို့ကိုအတော်များများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းများအနေဖြင့် တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့ နယ်ရှိ Processing Zone တစ်ခုတည်ထောင်ရန် ရှိပါကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်စိုက်ပျိုးသော ပြောင်းကိုတရုတ်ပြည်မှ မဝယ်ယူပါက ထိုပြောင်းကိုအခြားသောပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရန်၊ သရက်သီးကိုလည်း Processing လုပ်ပြီးဈေးကွက်ရအောင်ဖန်တီးရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Processing Zone တစ်ခုတည်ထောင်ရန် ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
မူဆယ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ (၇၂%) ခန့်ရှိကြောင်း၊ ကျောက်ဂူ (ရပ်စောက်)-နမ့်လန်-၉မိုင်ခွဲလမ်း (သီပေါ)လမ်းကိုဖောက်လုပ်ပြီးပါက Processing Zone မှမူဆယ် သို့ သွားရာတွင်မိုင် (၃ဝ)ခန့်လျော့သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းကို မိမိတို့အစိုးရဘက်မှ BOT စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါက Cargo ဖြင့်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလောက ဖွံ့ဖြိုး လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောက်ဂူ-ရပ်စောက်-နမ့်လန်-သီပေါလမ်း အနီးရှိ ကျိုင်းခမ်းဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဇုန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှိပြီး စိတ်ဝင်စားသောကုမ္ပဏီများလည်းရှိကြောင်း၊ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအနေဖြင့် အကျိုးအပြစ်နှင့်အကျိုးအမြတ်များကို အရင်ဦးစွာ လာရောက်လေ့လာ စေလိုပါ ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
အင်းလေးဟိုတယ်ဇုန်စီမံကိန်းတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့် လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်လာရောက် လုပ်ကိုင်သူများမရှိသေးသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လာရောက်လေ့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (၁) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း (၂) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (၃) ခရီးသွားလုပ်ငန်း စသည်တိုိ့ကို တိုးမြှင့်ပြုလုပ်သွားရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း၊ ပအို့ဝ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် စက်မှုဇုန် တစ်ခုတည်ထောင်ရန်ရှိသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
China Myanmar Economic Corridor (CMEC) အတွက် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် စီးပွားရေးဇုန်ကို လုပ်ဆောင်နေပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် CMEC နေရာ (၂)နေရာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးမှာလည်း အရေးကြီးပါ ကြောင်း၊ အစိုးရဘက်မှ ပြည်သူကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြပေးရန်လိုကြောင်း၊ မူဆယ်ရှိဂေါက်ကွင်းကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ပြီး Golf Tour လုပ်ရန်လည်းရှိပါကြောင်း၊ တင်ဒါလည်းဝင်ပြိုင်နိုင်ပါကြောင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး အနေဖြင့် ရွာငံတွင်ခဲ၊ မောက်မိုင်တွင်ဂေါ်ဒန်ကျောက်၊ ဘော်ဆိုင်းတွင်ခဲနှင့်ရောရာ၊ မိုးမိတ်ခရိုင်တွင်ရွှေ၊ တာချီလိတ်တွင်ရွှေနှင့် ကလောနားတွင် အကြီးစားလုပ်ကွက် အစရှိသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အေးသာယာမှ တောင်ကြီးသို့အထွက်တွင်လည်း အိမ်ယာစီမံကိန်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ရန် ကောင်းမွန်သောဒေသဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရပိုင်း မှလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လေးလေးစားစားဖြင့် ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
Presentation link - shorturl.at/BDN04
မြန်မာနိုင်ငံ၏ယခုအချိန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အလွန်ကောင်းသော အချိန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနများမှလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ဖန်တီးပေးနေပါကြောင်း၊ Law and Regulation, Legal procedure များကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးထားပါကြောင်း၊ ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်ရန်၊ ဒုတိယဦးစားပေးအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများအတွက် လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အစိုးရဌာနများ၏ SOP များကိုရေးဆွဲပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်နေပါ ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများအတွက် permit များချပေးပြီးလျှင် တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေ ပါကြောင်း၊ တတိယဦးစားပေးအနေနှင့် မြေယာဘဏ်တည်ထောင်ခြင်းကိစ္စကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် မြေယာကိစ္စသည် အဓိကအဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နေပါကြောင်း၊ ၀န်ကြီးဌာနများမှ မြေကွက်အလွတ်များရှိနေသည့်အခါတွင် online ပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးထားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ဒါဆိုလျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများက မည်သည့်နေရာတွင် မြေကွက်အလွတ်များရှိသည်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းပြောကြားပါသည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကဏ္ဍတွင်လည်း နိုင်ငံခြားဘဏ်များအား ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးချဲ့ ပေးခြင်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းများအား ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုခြင်းကိုလည်း ၀န်ကြီးဌာနများအနေနှင့် လုပ်ဆောင် ပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများသည် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပြီး ၄င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အချိန်တွင် လူငယ်များသည် Digital နည်းပညာများကိုလည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အပြောင်းအလဲ များကိုတစ်ချိန်တည်း တပြိုင်တည်းမှာ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူသားများအသုံးပြုရမည့် နေရာများတွင်စက်ကိရိယာများ၊ နည်းပညာများကိုအစားထိုး ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါကြောင်း၊ အဆိုပါကဏ္ဍ သည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအတွက် ရွှေရောင်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပြောကြား ခဲ့သလို မြန်မာနိုင်ငံသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသည့် အကောင်းဆုံးနေရာတွေ ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထ၀ီအနေအထားအရ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အချက် အချာကျပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတိုးတက်ဆုံး တိုင်းပြည်နှစ်ခုဖြစ်သည့် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယ၏ အလယ်တွင် ရှိသည့်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အာရှလမ်းမကြီးများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည် အချက်အချာကျသည့်နေရာတွင် တည်ရှိနေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် အဟန့်အတားမဟုတ်ပါကြောင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မည်ဆိုလျှင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Belt and Road Initiative သည် ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှတို့စီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအတွက် ကနဦးချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ရထားလမ်း၊ ကုန်းလမ်းများမှတဆင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်လျှင် လွန်စွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည် ဆိုပါက လူကြီးမင်းတို့အား ကြိုဆိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စစ်တွေဆိပ်ကမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးကို အိန္ဒိယနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်၊ ရခိုင်အရေးကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ယခင်ကတည်းကရှိခဲ့သောကိစ္စဖြစ်ပြီး ကာလတိုနှင့်ရှင်း၍မရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် လက်တွဲ၍ အဖြေရှာလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ပြဿာနာအရင်းအမြစ်ကို ရှာ၍ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မြေဆီမြေသြဇာကောင်းမွန်သည့်အတွက် မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်များ တည်ထောင်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ် ၁၇ခု ရှိသည့်အနက် ၃ ခုသာ လုံခြုံရေးပြဿနာရှိပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်ကို ကျင်းပရန်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါဖိုရမ်တက်ရောက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံများ ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလွယ်ကူစေရန်အတွက် Rule and Regulation တွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားပါကြောင်း၊ Online မှမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးထားပါကြောင်း၊ DICA ရုံးများကိုလည်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အသီးသီးတွင်ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ တွင် အသစ်ထွက်ရှိထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဥပဒေအရအခွင့်အလမ်းများစွာ ပေးထားပါကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသည်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အဆင်ပြေ စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကူအညီပေးရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးဌာန ဖွဲ့စည်းထားပါကြောင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာအခက်အခဲရှိပါက လာရောက်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
အပြောင်းအလဲများအနေဖြင့် Legal, Regulatory and Institutional Framework များကို ပြောင်းလဲ ပေးထားပါကြောင်း၊ ယခင်ကတားမြစ်ထားသော ကဏ္ဍများကိုလည်း နိုင်ငံခြား၊ နိုင်ငံခြားသား-မြန်မာ တွဲဖက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များပေးထားပါကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီများမှ အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် မတည်ရင်းနှီးငွေပမာဏ အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း (သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေ သန်း ၆၀၀၀ အထိ သတ်မှတ်ပေးထား ပါကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွက်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား DICA Website တွင်ရေးသားထားခြင်း၊ ကြေညာပေးခြင်း၊ စာရင်းဇယားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၊ Social media များတွင် လွှင့်တင်ကြေညာပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
MIC permit လျောက်ထားရာတွင် proposal ကိုလက်ခံလျင်ရက် (၆၀) အတွင်း အကြောင်းပြန် ပါကြောင်း၊ လက်မခံလျင်ရက် (၃၀) အတွင်း အကြောင်းပြန်ပါကြောင်း၊ ရွေးချယ်အတည်ပြုရေးအတွက် လက်ခံ လျှင်ရက် (၃၀) အတွင်း၊ လက်မခံလျှင် ရက် (၁၅) အတွင်း အကြောင်းပြန်ကြားပေးပြီး၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်အတွက်အား လက်ခံလျှင် ရက် (၃၀) နှင့် လက်မခံလျှင် (၁၅) ရက် အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်း ကြားပေးပြီး၊ မြေအသုံးပြုမှုအတွက် လက်ခံလျှင် ရက် (၃၀)၊ လက်မခံလျှင် (၁၅) ရက် အတွင်း အကြောင်းကြား ပေးပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ Permit လျောက်ထားမှုအဆင့်များနှင့် ကြာမြင့်ချိန်များကိုလည်း လျော့ချ ပေးထားပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေတွင် ပြောင်းလဲမှု၊ ဖြေလျှော့မှုများ များစွာ ပြုလုပ်ပေးထားကာ၊ အဓိကပြောင်းလဲမှု (၁၂) ချက်ကိုလည်း ဥပဒေအသစ်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ပြဌာန်း ပေးထားပါကြောင်း ပြောကြားကာ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါသည်။ (Presentation link)
ဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်က MSDP တွင်ပါဝင်သော Project Bank ကို Project bank ကိုမည်သို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ MSDP ဆိုတာဘာလဲ၊ ယခင်မူဝါဒများနှင့် မည်ကဲ့သို့ဆက်စပ်ကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် မည်သည့်အကျိုးအမြတ် ရမည်ဆိုသည်ကို မေးမြန်းမှုများရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ရှိပုံစံကတော့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအတွေမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်များ ရှိပြီးသားဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီမံကိန်းတွေသည် အစိုးရဘဏ္ဍာငွေကို မှီခိုပြီးလုပ်ရမည့် စီမံကိန်းတွေ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်ချို့စီမံကိန်းတွေက အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ ဌာနတစ်ခု ခြင်းစီကလာတဲ့စီမံကိန်းများဖြစ်သည့်အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါကြောင်း၊ ဒါတွေကို Coordination လုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ Coordination လုပ်ရမည့်နေရာမှာလည်း စနစ်ကျသော ပုံစံနှင့်မဟာဗျူဟာ လိုအပ် ပါကြောင်း၊ နောက်တစ်ချက်က အစိုးရမှလိုအပ်သော စီမံကိန်းများကို Development partner များနှင့် ပူးပေါင်း၍ရွေးချယ်/ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါကြောင်း၊ အများသောအားဖြင့် Development partner များမှ အစိုးရအေဂျင်စီများ၏ မူဝါဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မသိရှိကြပါကြောင်း၊ အစိုးရအေဂျင်စီများမှာ စီမံကိန်းမူဝါဒများ တစ်ခုတစ်မျိုးရေးဆွဲထားသည့်အတွက် မည်သည့်မူဝါဒက နိုင်ငံတော်နှင့် ၄င်းစီမံကိန်း အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါကြောင်း အစရှိသည်တို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
နောက်တစ်ချက်အနေနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဘက်မှလည်း စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးအား သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အေဂျင်စီများကို တင်ပြကြပါကြောင်း၊ သူတို့သည်လည်း အစိုးရအေဂျင်စီများ၏ မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စများကို သေချာစွာမသိရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့်မိမိတို့နေဖြင့် အစိုးရအေဂျင်စီများအားလုံး ပါဝင်ချိတ်ဆက်နိုင်၊ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော၊ စနစ်ကျသော မဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲရန်လိုပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ထိရောက် ပြည်စုံသော စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းစနစ်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အထက်ပါအခက်အခဲအားလုံးကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် Project Bank ကိုတည်ထောင်ခြင်း ဖြစ်ပြီးပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ Project Bank သည် One Stop Project Information Center ဖြစ်ပါကြောင်း၊ strategic action plan ကိုအခြေခံ၍ MSDP ၏မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီသော စီမံကိန်းကို ရွေးချယ်ပါကြောင်း၊ ရွေးချယ်ပြီးသော စီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Budget finance, ODA finance, private finance သုံးခုထဲမှမည်သည့် Finance ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ကို ရွေးချယ်ပါကြောင်း၊ ၄င်းနောက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲ ဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းအဆင့်ကို သွားပါကြောင်း၊ အကယ်၍ကုမ္ပဏီများမှ အစိုးရ၏ PPP စီမံကိန်းများဖြင့် မကိုက်ညီ သော project များတင်ပြလာပါကလည်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အခြားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ MSDP သည် Sustainable Development Gold (SDG) ကို မိတ္တူ/ပုံတူ ကူးထားခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း MSDP သည်အဓိကဒေါက်တိုင် (၃)ခုကို အခြေခံ၍ ပန်းတိုင်း (၅) ခုသို့ လျှောက်လှမ်းရန် အတွက်မဟာဗျူဟာ (၂၈) ချက်နှင့် (၂၅၁) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ် (၂၅၁) တို့ဖြင့် ရေးဆွဲ ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အသေးစိတ်အတိအကျ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဤ MSDP ကို ရေးဆွဲ သည့်အတွက်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအေဂျင်စီများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးတက် မြင့်မားလာခြင်း၊ မူဝါဒလမ်းကြောင်းများအား ထင်သာမြင်သာရှိစေခြင်းနှင့် ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်း၊ နှစ်နှစ်တစ်ခါ ပြင်ဆင်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာများအား စုဆောင်းနိုင်ခြင်း အကျိုး ကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ Project Bank ကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၀န်ကြီးဌာနများ အားလုံး၊ Development Partner မျာအားလုံး၊ လွှတ်တော်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ၊ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များထံမှ လည်းသဘောထားမှတ်ချက်များကောက်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
MSDP နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်မည်နည်းဆိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါကြောင်း၊ ပန်းတိုင် (၃) သည်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် လုံးဝဆက်စပ်လျက်ရှိသော ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပန်းတိုင် (၃) ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသေးစိတ်ကျသော မဟာဗျူဟာများရေးသားထားပါကြောင်း၊ SOP များ ရေးဆွဲပြဌာန်းပေးထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပြောင်းလဲပေးထားခြင်း၊ တားမြစ်ထားသော မူဝါဒများအား ပယ်ဖျက် ပေးထားခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် တိကျပြည့်စုံစွာရေးသားပေးထားပါကြောင်း လေ့လာကြည့်လျင် သိနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Myanmar Sustainable Development Plan သည် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ပထမဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒ ရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ MSDP အား အကောင် အထည်ဖော်ရန်အတွက် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကနှင့် Development partner များ တက်ညီလက်ညီ ပူပေါင်းလက်တွဲ လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ MSDP တွင် ကဏ္ဍအားလုံး၊ ပြည်သူအားလုံးနှင့် ဆက်စပ် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များမှာ၊ မျှတခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံ ရေရှည်တည်တံ့ စေခြင်း၊ ပဋိပက္ခဖြစ်လွယ်သည့် အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စသည်တို့ပါဝင်ပါကြောင်းကို ပြောကြားပါသည်။
ခေါင်းစဉ်လေးရပ်ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကြွယ်ဝစေရေး အတွက်ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးပါဝင်နိုင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ရပ် ဖန်တီးရန်၊ မူဝါဒများနှင့် စီမံကိန်းများကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စနစ်တစ်ကျဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍ နောင်လာနောင်သားများအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်ဟူသော အယူအဆကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး အပေါ်အလေးပေးသုံးသပ်ရန်၊ Stakeholder များ၏ထိလွယ်၊ ရှလွယ်သော အနေအထားများကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစား၍ လုပ်ငန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် စီမံခန့်ခွဲကြီးကြပ်ရန်၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မှရရှိနိုင်မည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးရလဒ်များကို စီစစ်သတ်မှတ်အသုံးချရန်တို့ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဆိုလျှင် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေး စရိတ်နှင့် ဒေသတွင်းဈေးနှုန်းကွာဟမူလျော့ကျခြင်း၊ ဒေသတွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှု တိုးတက်လာနိုင်ခြင်း၊ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ တိုးတက်လာခြင်းစသည့် အကျိုးရလဒ်များကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာမက ဒေသတွင်းရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူဦးရေ ဗဟိုချက်နေရာများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နောက်ကျကျန်နေသေးသော ဒေသများအတွင်း လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊ ကျေးလက်ဒေသများကို အဓိကထား၍ လုပ်ငန်းများနှင့် ဈေးကွက်များ အကြားချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးမည့်ဦးစားပေး အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် သင့်လျော်သည့် စွမ်းအင်ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် တန်ဖိုးသင့်တင့်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် စွမ်းအင်ကို ပြည်သူလူထုနှင့်လုပ်ငန်းများကို ပေးရန် ဟု ရေးဆွဲထားပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုနှင့် အကောက်ခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှု၊ ဘက်စုံကုန်သွယ်မှု မူဝါဒတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံလမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် စသည့်အချက်များကို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှု ကဏ္ဍကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများအား ကောင်းခိုင်မာလာစေရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့် online privacy ရှိစေပြီး၊ အွန်လိုင်း ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှုတို့ကို ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် အချက်အလက်များကို သိမြင် နားလည်ခြင်းတို့ဖြင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် Digital စီးပွားရေးဆီသို့ ကူးပြောင်းရန်ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း မဟာဗျူဟာ ကိုရေးဆွဲ၍ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့် အားကောင်းခိုင်မာသည့် မေခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပန်းတိုင်အား တက်လှမ်းရန်၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကဦးဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရရှိရန်အတွက် ကျေးလက် ဒေသဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးအတွက် အခြေခံအဖြစ်အားလုံးပါဝင်သည့် ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအလေ့အထ များဖြင့် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော စီးပွားရေးကိုပံ့ပိုးမည့် ၀န်းကျင်တစ်ရပ် ဖန်တီးရေး မဟာဗျူဟာ ကိုရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် (၂) နှစ်တစ်ကြိမ် အမြဲတမ်း update လုပ်သည့်ပုံစံဖြင့် သွားမည့်စီမံကိန်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကာလတစ် လျှောက်လုံးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ပြီးကာလနောက်ပိုင်းအထိ စီမံကိန်း၏ထိရောက်မှု၊ စွမ်းရည်ပြည့်ဝမှု၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် သက်ရောက်မှုတို့ကို မျက်ခြေမပြတ် သိရှိတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက် ညီညွတ်ပြီး တစ်သတ်မတ်တည်းဖြစ်သည့် အစိုးရ၏စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းမူဘောင် ရရှိရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်သည့်အတွက် စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ် သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြီးပြည့်စုံသည့် ရလဒ်မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲချမှတ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။ ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား project bank ပြုစုရေးဆွဲရန်၊ Project Bank ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ MSDP ကို ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ပရောဂျက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေမည့် ပရောဂျက်များကို ဦးစားပေးသည့် အစိုးရစီမံကိန်း များကိုထုတ်ပြန်ရာတွင် သိသာထင်ရှားစွာ ခန့်မှန်းပေးနိုင်ရန်၊ MOPF နှင့် IGAs တို့နှင့်ညှိနှိုင်းပြီးနောက် project အောင်မြင်စေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးဆွဲရန်တို့ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှူများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ သုံးသပ်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလာအလားကောင်းများ နှင့် အခွင့်အလမ်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ penalists များ၏ ဆွေးနွေးချက်များမှာ -
Vikram Kumar - မြန်မာနိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်ကထက် ပို၍တိုးတက် ပြောင်းလဲလာပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင်လည်း ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှိနေပါကြောင်း၊ အစိုးရ သည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ၌ အမြတ်ရရှိရုံ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ်များ အထိပါ စဉ်းစား ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဦးဆက်အောင် တင်ပြသွားသော Project Bank စီမံကိန်းသည် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အင်မတန် တန်ဖိုးကြီးသောလက်ဆောင် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း လွတ်နေသည့် အပိုင်းများ၊ လိုအပ်နေသည့် အပိုင်းများ ရှိနေပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ၊ အစိုးရ၊ ၀န်ကြီးများ အားလုံး နားလည်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်မှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အသုံးချနိုင်မှု စသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လိုအပ်လျက်ရှိနေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
Yuan Shaobin - မိမိတို့မှာ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် Developer အဖြစ် အောင်မြင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်က မြန်မာအစိုးရနှင့် Commercial Model ကို ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုစဉ်က ကျောက်ဖြူဒေသကို မိမိရောက်ရှိခဲ့စဉ်က အခြေခံအဆောက် အအုံများ မရှိသေးကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အရေးနည်းပါးခဲ့ကြောင်း၊ ကျောက်ဖြူရေနက် ဆိပ်ကမ်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ များဖြစ်သည့် အိမ်များ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေပေးဝေရေး၊ လမ်းများကောင်းမွန်လာပါက ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးများ ဖော်ဆောင်ခြင်း (ဥပမာ - ကျောက်ဖြူ မှ နေပြည်တော်အဝေးပြေးလမ်း) ဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသ လည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နည်းနေသေးသောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများစွာ လိုနေသေးကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကျိုးအမြတ်ရှိမည့် အချက်များကိုချပြပြီး ဖိတ်ခေါ် သင့်ကြောင်း၊ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်သည့် ကဏ္ဍ၏ Model နှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ထုတ်ကုန် Model အဖြစ် တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Kunio Nigishi - သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်မှ စ၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းကို စတင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဇုန် (အေ) ရှိ (၄ဝဝ) ဟက်တာမှာ ရောင်းချပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဇုန် (ဘီ) မှာလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အောင်မြင်သောအနေအထားတွင် ရှိပါကြောင်း၊ ထိုသို့အောင်မြင်ရခြင်းမှာ အချက်(၃) ချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပထမအချက်အနေဖြင့် ပထဝီ အနေအထားအရ ကောင်းသောနေရာတွင်တည်ရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးမြို့တော်နှင့် ကြီးမား သောဈေးကွက်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့နှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိခြင်း၊ ဒုတိယအချက် အနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရ အကူအညီဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသော One Stop Service Center (OSSC) မှာ အလွန်ပင် အကျိုးရှိပါကြောင်း၊ ပါမစ်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာထဲတွင် အပြီးအစီး လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း၊ အရေး အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် တတိယအချက်အနေဖြင့် ဂျပန် အစိုးရ၏ ODA အကူအညီဖြင့် လျှပ်စစ်မီး၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့် ရေပေးဝေရေးစသည့် အခြေခံ အဆောက် အအုံများကို တည်ဆောက်ပေးနေကြောင်း၊ ၄င်းအခြေခံ အဆောက်အအုံများမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို စိတ်ဝင်စားစေပါကြောင်း၊ သီလဝါတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ ကုမ္ပဏီပေါင်း (၁ဝဝ) ကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာကို ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များမှလည်း အထူးပင် စိတ်ဝင်စား ပါကြောင်း၊ သီလဝါ စက်မှုဇုန်တွင် လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စက်ရုံ အများစု မှာ တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေပါကြောင်း၊ မနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ Manufacturing ကုမ္ပဏီများမှလည်း စိတ်ဝင်စားလာကြပါ ကြောင်း၊ (ဥပမာအားဖြင့် JFE Steel ကဲ့သို့သော အစိုးရ၏ Steel Plant တည်ဆောက်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီ)၊ သီလဝါ အထူး စီးပွားရေးဇုန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်အောင်မြင်သော စီးပွားရေးအဖြစ် ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာကောင်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် -
ဦးသိမ်းဝေ - New Yangon Development Company နှင့်ပတ်သက်၍ ယခုစီမံကိန်းသည် ထင်ရှားသော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပထမအချက်အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတဝိုက်တွင် မြို့သစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစီရင်ခံစာအရ (၂ဝ၃ဝ) ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၏ လူဦးရေမှာ များစွာပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကို ထပ်မံချဲ့ထွင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ NYDC ကို ချမှတ်ပေးထားသော KPIs အရ New Yangon City စီမံကိန်းသည် အလုပ်အကိုင်အသစ် ၂ သန်း ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ ယခု အချိန်တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၇ သန်းရှိပါကြောင်း၊ နောက်ထပ် အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၂ သန်းအနေဖြင့် စက်ရုံပေါင်း (၁ဝဝဝ) နှင့် ထိုစက်ရုံတစ်ခု စီတွင် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း (၂ဝဝဝ) ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို ကြည့် လျှင် စက်ရုံတစ်ရုံစီတွင် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း သောင်းဂဏန်းမျှ ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စက်မှု လုပ်ငန်းအခြေခံသော မြို့တော်တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက စက်ရုံတစ်ရုံ၊ အလုပ်နေရာပေါင်း (၁ဝဝဝ) မှာ မများကြောင်း၊ အရေးကြီးသည်မှာ ထိုစက်ရုံ (၁ဝဝဝ) ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် နိုင်ရန်အတွက် လုပ်သာ ကိုင်သာရှိသော အခွင့်အလမ်းဖန်တီး ပေးရန်သာလိုပါကြောင်း၊ ပထမဆုံး ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ (၃ဝဝ) မှာ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုစက်ရုံများ လည်ပတ်နေသောအချိန်တွင် နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီပေါင်း (၇ဝဝ) မှာ အလွယ် တကူဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရေးကြီးသည်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံ (၃ဝဝ) အရင်ဦးဆုံး ဝင်လာရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယခုလတ်တလော ဖြစ်နေသော အမေရိကန်နှင့် တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ အခြားအလား အလာရှိသော နိုင်ငံများကို ရှာဖွေလာကြောင်း၊ အာရှတွင် နိုင်ငံ (၄) နိုင်ငံ လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ထို (၄) နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ လုပ်အားခမှာ မြင့်မားသောကြောင့် ၄င်း (၄) နိုင်ငံနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်မှစ၍ စီးပွားရေး တဟုန်ထိုးတိုးတက်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့မှာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ ရွှေ့ပြောင်းမှုကို အခွင့်အလမ်းကို အရယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ New Yangon City သည် မှန်ကန်သောအချိန်၊ မှန်ကန်သောနေရာတွင် မှန်ကန်သော အစီအစဉ်တွင် ရှိနေပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် NYDC သည် မြန်မာအစိုးရမှ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်လာသော စီမံကိန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အင်တာပရိုက်စ်များကို အခြေပြု ထားသော ပုံစံဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစဦးဆုံး အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅) ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ NYDC မှ ထည့်ဝင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇) ဘီလီယံ ရှိပါကြောင်း၊ Item (၆) ခုပါဝင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၆၈) ဘီလီယံ ကို မည်သည့်နေရာကမျှ ချေးငှားခြင်း မရှိဘဲ ပုဂ္ဂလိက အင်တာပရိုက်စ်များ၏ ငွေဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပါကြောင်း၊ အခြားအဓိကကျသောPackage (၆) ခု လည်း ရှိပါကြောင်း၊ ၄င်းတို့မှာ Telecommunication ကို အခြေခံသော Cyber Connectivity Backbone, Public Transport, Affordable Housing, Municipal Waste Treatment နှင့် Convention Center တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက် ခြင်းတွင် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အခြေပြုသောပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ အနေဖြင့် အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ယခုပွဲ ဖြစ်မြောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသော UMFCCI, MIC, MIFER, DICA နှင့် MOPF မှ တာဝန်ရှိသူများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မိန့်ခွန်းတွင်လည်း Action Plans, Directives စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းပြောကြားသွားကြောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်များမှလည်း လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ဖိတ်ခေါ်သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ၄င်းအချက်မှာ ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးသွားသော ဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်တို့၏ ပြောကြားချက်များတွင်လည်း မဟာဗျူဟာများ၊ လမ်းပြမြေပုံများနှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များပါဝင်ပါကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုအနေဖြင့် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်လာရန်နှင့် အမှန်တကယ်ရလဒ် ထွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ရခိုင်အရေး နှင့် ပတ်သက်ပြီး အရှေ့ နှင့် အနောက် နိုင်ငံများ၏ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံက မတူပါကြောင်း၊ အနောက်ဘက်နိုင်ငံများသည် ရခိုင်ဆိုလျှင် မြန်မာ၊ မြန်မာဆိုလျင် ရခိုင် ကိုသာ မြင်ကြပါကြောင်း၊ ဒါသည် အဓိပ္ပါယ် မရှိပါကြောင်း၊ အရှေ့ဘက်နိုင်ငံများမှာ ရခိုင် ပြဿနာသည် မြန်မာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး၊ သည်ပြဿနာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံး အပြစ်မတင့်သင့်ကြောင်း၊ ချန်ထား၍ မဖြစ်ကြောင်း၊ ကူညီရမည်ဟု တွေးကြပါ ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ရခိုက်ကိစ္စကြောင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရနိုင်ဟု မတွေးပါ ကြောင်း၊ မဖြစ်စေချင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအစိုးရများ၊ နိုင်ငံ ရေးပါတီများသည် ရခိုင်အရေးကိစ္စအား ဖြေရှင်းရန် အရည်အချင်းရှိသည်ဟု အထင်ရောက် နေကြပါကြောင်း၊ အဆိုပါအတွေးသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ကိစ္စသည် တစ်ညတည်း ဖြင့် ဖြေရှင်းလို့ရသည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါကြောင်း၊ သမိုင်းကြောင်းပြဿနာ၊ အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အားလုံးသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ ကြီးပွား တိုးတက် စေရန်အတွက် ဆက်လက်ရှင်သန်ကြရဦးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် အစိုးရ၏ အစီအမံများဖြင့် ရခိုင်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘ၀များ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ပူးပေါင်း၍ ကြိုးစားကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကလည်း ကူညီ ပေးကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အနောက်နိုင်ငံများမှ ရခိုင်သည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟုဆိုကာ မြန်မာကိုဖယ်ထုတ် လိုက်မည်ဆိုပါက ဤမှတ်ချက်သည် အလွန့်အလွန် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။
အစိုးရအား အပြုသဘောဆောင်သော အကြံပြုချက်များပေးရာတွင် -
Vikram Kumar - ပထမအချက်အနေနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လုံလောက်စွာ ရရှိရေး စီမံကိန်းများကို အာရုံစိုက်ရန်၊ PPA ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ရန်၊ ဒုတိယအချက်အနေနှင့် Insolvency law ကို အမြန်ဆုံးအတည်ပြုပြဌာန်းရန်၊ အဆိုပါ ဥပဒေသည် Ease of Doing Business တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အဆင့်တက်နိုင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီး ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ တတိယအချက်အနေဖြင့် YCDC သည် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ကောက်ခံသော နှုန်းထားများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် Doing Business တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များ နှင့် ကြီးမားစွာလွဲမှားနေပါကြောင်း၊ Land Registration က်ို ဆောင်ရွက်ရန်၊ Construction permit များလျင်မြန်စွာရရှိရန် အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သိရှိ၍ ထိရောက်သော ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဦးသိမ်းဝေ - နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မြေပြင်/လက်တွေ့တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသော အခြေအနေကို သိရှိရန် ကြိုးစားပေးပါရန်၊ ကြီးမားသော ကွာဟမှုများရှိနေပါကြောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဘက်မှလည်း အစိုးရအနေဖြင့် ယခင်က အဖြစ်နိုင်သည့် အရာများကို ယခုအချိန်တွင် ကြိုးစား၍ ပြောင်းလဲနေသည့် အတွက် မျှော်လင့်ချက်ကို မစွန့်လွတ်ဘဲ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်၍ ရည်ရွယ်ချက်ကို အရောက်သွားရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၁) Invest Myanmar Summit 2019 GALA DINNER (ညစာစားပွဲဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း)
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ Invest Myanmar Summit 2019 ပထမနေ့ ညပိုင်းတွင် ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ဂုဏ်သရေရှိဧည့်သည်တော် လူကြီးမင်းများအား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါညစာစားပွဲသို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ Invest Myanmar Summit ၂၀၁၉ ပွဲကြီးအား Sponsor ပေးခဲ့သော ကုမ္ပဏီကြီးများကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာဖြင့် ညစာသုံးဆောင် ခဲ့ကြပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၂) Exbitiors of Invest Summit Myanmar 2019
Myanmar Education Development (MED)
Southern Inle Lake by Sustain Development
Myanmar Institute of Director
MPRL E & P Pte.Ltd
Zeya and Associate Co.,Ltd
Myanmar Liquified Gas Group Co.,Ltd
New Strand Development Co.,Ltd
Myanmar Inovative life Science (MILS)
UMG Group of Co.,Ltd
Myanmar Consumer Beverage Limited
Myanmar C.P Liverstock Co.,Ltd
Myanmar Belle Group
D & T Myanmar Travel
IME property Co.,Ltd
Mottama Holding Co.,Ltd
National Infrastructure Holding Co.,Ltd
Myanmar Tourism Development Public Co.,Ltd
Ayeyarwaddy Resort & Villa Development Co.,Ltd
Tet Lann Construction Company Limited
Golden Development Group Co.,Ltd
Mother Industrial Co.,Ltd
BXT International Co.,Ltd
Fortune International Co.,Ltd
EFR Group Co.,Ltd
Myanmar Power Spectrum Co.,Ltd
Myanmar Sugar Development Public Company
Myanmar Textile City Co.,Ltd
Shwedone AYA EPZ @ Aung Shwe Thee Co.,Ltd
နောက်ဆက်တွဲ (၃) ပြခန်းတာဝန်ခံများထံမှ ကောက်ယူရရှိသော အဖြေလွှာများမှ ကောက်နှုတ်ချက်
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ Agriculture Development Zone- ကျိုင်းခမ်းဧရိယာဧက (၈သောင်းကျော်) ကို ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ငန်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ Shopping Mall ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနှင့်အိမ်ယာစီမံကိန်း - တာချီလိတ်အိမ်ယာစီမံကိန်း တို့ကို I Green နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အသေးစားအလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို U Lay Naing (Director, DICA) နှင့် Li Yuanlin (Vice Chairman)၊ ဦးရဲဖုန်းလှိုင် (MD) တို့နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံးသို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန်၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ BOT စနစ်ဖြင့်လမ်းများတည်ဆောက်ခြင်း (ဂန့်ဂေါ-ကလေးလမ်း) အတွက် Korea Express Cooperation မှ Mr. Kim, Kyungtae နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ - ရေဦး-ကလေးဝ၊မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါ လမ်းများနှင့် ဂန့်ဂေါ-ကလေးလမ်းများတွင် Public-Private Partnership (PPP) စနစ်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း၊ Korea Express Way Cooperation သည်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဂျပန်အစရှိသည့် အာရှနိုင်ငံများတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံရှိကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့်လည်း KEC သည် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ထိုးထားလျှက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ BOT လမ်းများတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မရှိသေးသည့်အတွက် အလားအလာရှိသော စီမံကိန်းများ ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးစင်္ကြံများ (economic corridors) နှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသဖြင့် အကျိုးများစွာရှိနိုင်ကြောင်း၊ DOH, MOC မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ AATD အစီးရေနည်းနေခြင်း Financial Estimate for Project လိုနေသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ စစ်ကိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းအတွက် စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ Hnin Yu Mon Satiate (MYA) Co.,Ltd. Chin Southern Power Grid Co., Ltd နှင့် Mandalay Golden Wing Holding Ltd. တို့ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနှင့် မြေဧကအကျယ်အဝန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များအား လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဆန်စပါးကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Seed Center တည်ထောင်ခြင်းအတွက် ဦးခင်မောင်ညွှန့်၊ ညွှန်မှူး၊ စိုက်ပျိုးရေး သည် Mr. Haub နှင့်ဆွေးနွေးရာ အမေရိကန်အခြေစိုက် JJ Pun ကုမ္ပဏီမှ Constantin Haub က ဓါတုဓါတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကို စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက်စမ်းသပ်/စံပြကွက်များဖြင့်ပညာပေးဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ ၄င်းကုမ္ပဏီ ထုတ် ဓာတုဆေးဝါးများမှာ ကျန်းမာရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေ ရှိစေမည့် ထုတ်လုပ်မှုအသုံးပြုမှုများဖြင့် ဖော်စပ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေး ဆောင်ရွက် လိုပါက ဌာနနှင့်ဆက်စပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဓါတုအခြေခံဓါတ်မြေ/ပိုးဆေးများထက်သဘာဝအခြေခံ Organic fertiliser, Pesticides များကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးစွဲရေးသည် ခေတ်ကတောင်းဆိုချက် ဖြစ်သဖြင့် Organic များကိုပို၍အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဆိပ်ခံတံတားနှင့် မြစ်ကမ်းနားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းအတွက် U Nay Min Soe (Assistant Director, DICA) သည် Jackie Ran (GM / CM Fund) နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ စစ်ကိုင်း Port and City Development Project တွင်ရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ရမည့် Plant များ Developer အတွက် အားနည်းချက်/အားသာချက်များ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိပြီးဆက်သွယ်လာမည့် အလားအလာရှိ Project အသေးစိတ်ကို mail ဖြင့်ဆက်သွယ်၍ ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက် ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးချုပ် သည်ကောင်းထက်၊ China Embassy၊ Gaerishe, Trade Pvt. Limited တို့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လာရောက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ မုံရွာဆိပ်ကမ်း Project ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စရပ်များ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ဖြေကြားခဲ့ပြီး N.Yonemurh, Japan Economy Investment Corne,Hayman Capital တို့နှင့် SME လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အသေးစား လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ချေးငွေလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးကြသည့်အပြင် Jeff Turner,David Walker တို့နှင့်လည်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ Man Aung Island Eco Tourism Development အတွက် ဦးဥာဏစိုးမှ Mitchel Tan နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ Man Aung Island Eco Tourism Development Project အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ငပလီလေယာဉ်ကွင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက် ဒေါက်တာ ထူးမင်းသိန်း မှ Peter Crowhurst နှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ တက်ရောက်ဆွေးနွေးသူများသည် ငပလီလေဆိပ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုအား တက်ရောက်သူကိုယ်တိုင် အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး ကူညီရန်လိုလားပါသည်။ လေဆိပ်နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ တိကျစွာသိနိုင်ပါက ရှေ့လျှောက်လက်တွဲမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူနိုင်၍ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူသည် လေဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက် အလက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ တက်ရောက်သူထံ ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ မာန်အောင်ကျွန်း -မာန်အောင်ကျွန်း project ရှင်းလင်းပြောကြားရာ Villa တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့်ပုံစံ၊ Eco Tourism အကြောင်းနှင့် Village Development တို့ ပါဝင် ပါသည်။
၄။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးမင်းဇော်ဦး သည် Mr. Wang Hiayuan နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း၌ကြေးနီ(Copper)ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါသည်။ ကြေးနီသတ္တုသိုက်ရှိရာ ဒေသများသို့ Field visit ဆင်းရန် Date ရွေးမည်ဟု ပြောကြားပါသည်။ ၂ဝ၁၉ခုနှစ် မတ်လ၌ ပြုလုပ်မည့် Chin Investment Forum (2019) ၌တက်ရောက်မည်ဟုလည်း ပြောကြားပါသည်။ KINCAID Group သည်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်၂၀၁၈နိုဝင်ဘာလအတွင်း (ပ)အကြိမ် ကြေးနီ (Copper) ထုတ်လုပ်မှုဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ပါသည်။ကြေးနီသတ္တုထွက်ရှိရာဒေသများ၌၂ဝ၁၉မတ်လအတွင်း site visit ဆင်းမည်ဟု ပြောကြားပါသည်။ ကြေးနီ (Copper) ထွက်ရာဒေသဖြစ်သည့် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ရင်ကွဲတောင်ဒေသသို့ ၂ဝ၁၉ မတ်လ အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ဆောင်ရွက်ရန် Plan ရေးဆွဲမည်ဟုသိရှိ ရပါသည်။ သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန (ချင်းပြည်နယ်)DICA (ချင်းပြည်နယ်) တို့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးခြင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ လိုအပ်သော အကူအညီများ ပံ့ပိုး ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၅။ ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ Pathein Industrial City Project မှ ဒေါ်သန်းသန်းနိုင်သည် Mr. Wang Hiayuan နှင့် ဆွေးနွေးရာ ၄င်းတို့ Company တွင်လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း များစွာရှိသည့်အနက် အလားအလာရှိသော လုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းလည်းပါဝင်ကာ ဆွေးနွေးချက်အရ Pathein Industrial City တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ၄င်းတို့အနေဖြင့် Pathein Industrial City Project အားစိတ်ဝင်စားပါသဖြင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ March လလောက်တွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန်ချိန်းဆိုထားပါသည်။
၆။ တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ဦးထွန်းထွန်းမှ ဆွေးနွေးရာ Tourism, Construction စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအကြောင်းတို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ရာဘာကုန်ချောနှင့်ရာဘာသစ်အချောထည်စက်ရုံများအကြောင်းကို Dr. Yu Sein မှ Thuya Thewin - Rubber value added supply chain နှင့် Ray Yee Latt Aye - Capital Partnersor buy share from Dawdi Golden Land Co.,Ltd. တို့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ TOR ရေးဆွဲရန်၊ CAPITAL PARTNER များပိုမိုရရှိလာနိုင်ရန် လေ့လာသွားရန်၊ မြန်မာကုမ္ပဏီများအတွက် Capital Partners များ ပြုလုပ်ရန် Workshop များ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။Mr. Kevin M. Murphy (MD) ANDAMAN နှင့် ဆွေးနွေးရာ RSS Factory များအတွက် JV ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ဆက်လက်ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန် ရာဘာထုတ်ကုန်ကို ရေရှည်ထုတ်လုပ်သွားရန်၊ ကားတာယာစက်ရုံသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း၊ Anatoly Bulochini – KOV ရုရှားသည် ရာဘာများကို မလေးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ ဝယ်ယူမှုများစွာရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူလိုကြောင်း၊ မြန်မာပြည်မှ ဝယ်ယူနိုင်မည့် ပုံစံကို လေ့လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုရှားမှ အဝယ်တော်များအတွက် မြန်မာ့ရာဘာသည် အလားအလာ ကောင်းပါကြောင်း၊ study tour ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားပေးရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဟိုတယ်၊အိမ်ယာနှင့် ဈေးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း များအတွက် U Aye Min Soe မှ Pakainay.Leng-ee ၊ Htoon Nay Htoon (GE Power) နှင့် Wang Haiyuan (KINCAID Group) တို့ (၃) ဦးနှင့် ဆွေးနွေးရာ မြေအနေအထားအခြေအနေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထား၊ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိမှုအခြေအနေတို့ကို ဆွေးနွေးကြရာ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် လွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်လွယ်ကူစေရန်လိုအပ်ကြောင်းတို့ ပြောကြားပါသည်။
၇။ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရာဘာကုန်ချောနှင့်ရာဘာသစ်အချောထည်စက်ရုံများ အကြောင်းကို ဦးနိုင်ဝင်းတိုး မှ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်နှင့် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အတွင်းတွင် ရာဘာစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်၍ ရာဘာကုန်ချောနှင့်ပရိဘောဂစက်ရုံများ တည်ထောင်ရန်၊ မလေးရှားအခြေစိုက် ရာဘာ လုပ်ငန်းစုနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် ဒေါ်မီမီလင်း (MD Investment LLC) မှချိတ်ဆက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရာဘာစိုက်ခင်းအတွက် မြေရရှိရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေတင်ပြရန် ပြည်ပကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ထံ လာရောက်တွေ့ဆုံသွားခြင်း နှင့် ရာဘာအမျိုးအစားကောင်းများ စိုက်ပျိုးသွားရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ နေရောင်ခြည်သုံးဓါတ်အားပေးစက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်း ကို ဦးနိုင်ဝင်းတိုး၊ ဦးရဲဖုန်းလှိုင်၊ ဦးကျော်မောင်မောင် တို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး solar power 10 MW သို့ ထုတ်လုပ်ရန် Feaxible study ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၈။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ Yangon City Development Committee မှ ဦးတင်မောင်မြင့်သည် (က) Mark Livingston (Managing Director)၊ (ခ) Lyu Chenyang (Senior Marketing Manager)၊ (ဂ) Taipei Computer Association ၏ Project Manager တို့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ -
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်နယ်နမိတ်ပြင်ပ (၁၁) မြို့နယ်အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ စက်မှုဇုန်များ ထူထောင်နိုင်ရန် တစ်မြို့နယ်ချင်းစီအလိုက် လျာထားစက်မှုဇုန်နေရာများအား မြေပုံကားချပ်များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ သည့်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများ လာရောက်မေးမြန်း၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူကြပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများ Booth တွင်လာရောက်မေးမြန်း၍ (၁၁)မြို့နယ် စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ရေးများအတွက် စိတ်ပါဝင်စားကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ဖိတ်ခေါ်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး Invest Myanmar Summit ဆွေးနွေးပွဲများသို့ စဉ်ဆက်မပြတ် တက်ရောက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမို ရယူသင့်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ Yangon Metropolitan Developemnt Public Co.,Ltd. မှ ဦးမျိုးမြင့် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ မြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အခွင့်အလမ်းများကို Project Bank အနေဖြင့် သိရှိရသဖြင့် စိတ်ဝင်စားကြောင်း၊ DICA အကြောင်းကိုလည်း ပိုမို သိရှိခွင့်ရကြောင်း၊ အလားအလာကောင်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လည်း အဆက်အသွယ်များရကြောင်း၊ နောင်နှစ်များတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါက ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ Yangon Region Investment Committee မှ ဦးမျိုးခိုင် နှင့် Dr. Mathan S Raja, director, Swaas UK Ltd. တို့ဆွေးနွေးရာ ပြည်တွင်း recycle box များအား ပြည်ပသို့ ပြန်လည် တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုခြင်း YCDC နှင့်ဆက်သွယ်ရမည့် contact အားပံ့ပိုးပေးခြင်း အကြောင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့နောက် Jipyong LLcMr. Brcian K.OH နှင့် ဆွေးနွေးရာ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးနောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား သိလို၍ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရသော မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် Registration Act တို့အရမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲအား အကူအညီပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှဆက်လက် ဆောင်ရွက် ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မြေငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်အပေါ် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြား ခဲ့ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့အား တွေ့ဆုံ၍ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ Mr. Liao, Kuo Hung (Project Manager, Core Pacific Group) နှင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် ဒလစက်မှုဇုန်စီမံကိန်း တည်ဆောက်လိုခြင်းလုပ်ငန်း၊ NYDC ဖြင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း အတွက် ဦးသိန်းဝေမှ ဆွေးနွေးပြောကြားပေးရာ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် NYDC နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်ကြောင်း၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများစွာ ရှိသည့်အနက်မှ မိမိနှင့်ကိုက်ညီသော အဆက်အသွယ်များရရှိခြင်း၊ ပိုမိုတိကျသည့် ရှေ့ဆက် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။
၉။ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်၊ စီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီး၊ စည်ပင်ဝန်ကြီး - ဦးဇော်လင်းအောင် တို့သည် သီဟဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ၊ Mr. Sunip Barman၊ Construction Co.,Ltd. India၊ Mr. Lin Godong၊ KAMA Industry Co., Ltd. တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေး လေ့လာကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ MOGE လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်သည် IKBZ မှ ဦးညိုမြင့်နှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုသည် Oil and Gas sector ကို စိတ်ဝင်စားကြပါကြောင်း၊ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် စက်သုံးဆီနှင့် ဓါတ်မြေသြဇာ ထုတ်လုပ် ခြင်းတို့တွင် ရှိနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်ပိုမို သိရှိလိုကြကြောင်း၊ offshore and onshore များအတွက် နိုင်ငံတကာဈေးပြိုင် ခေါ်ယူခြင်းကို မကြာမှီ ပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ Oil and Gas ကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများကို လာရောက်လေ့လာစေလိုကြောင်း တို့ဆွေးနွေးပါသည်။
၁၁။ Ministry of Tourism & Hotel မှ ဦးမျိုးမြင့် သည် ဆွေးနွေးသူ Albert Hesselsဘက်မှ eco lounge လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ3star နှင့်အထက်မှနိုင်ငံခြားသားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ - တာဝန်ရှိသူမှ eco lounge project များသည် investment ပမာဏနည်းခြင်း eco-friendly ဖြစ်စေရန် ဒေသထွက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုကြောင်း၊ Mr. Hessels အနေဖြင့် eco lounge project ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးကာ MIC သို့ proposal တင်ပြီးဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး၊သစ်တောဝန်ကြီးတို့နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထပ်မံ၍အသေးစိတ်သိလိုသည်များကို Ministry of Hotel & Tourism website မှ ဖြစ်စေ email address မှ ဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်းအကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Ministry of Hotel and Tourism – ဦးမျိုးမြင့် (ညွှန်ကြားရေးမှူး) သည် Ryan Russell နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ ကရင်ပြည်နယ် ၌ invest လုပ်ရာတွင် နယ်မြေအေးချမ်းမှု၊ လုပ်ငန်းလုံခြုံမှုအတွက် အစိုးရဘက်မှ တာဝန်ယူမှု ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုသဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြပွဲတွင် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရန် ညွှန်ကြားအကြံပြုခဲ့ပါသည်။ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာပေးထားခဲ့ပါသည်။
၁၂။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ New Mandalay Resort City အတွက် ဆွေးနွေးပြောကြားရာ လာရောက်ဆွေးနွေးသူမှ စီမံကိန်းစတင်မည့်အချိန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည့်ကာလ၊ ဆောင်ရွက်မည့် အဆင့်ဆင့်၊ မြေအသုံးချနိုင်မှု နှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
Ministry of Constructionဒေါ်သွန်းသီရိထွဋ် - Chan Mya Oo - Fibre Infrastructure များအား စီမံကိန်းများတွင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ Investment အတွက်တာဝန်ရှိသူများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
Ministry of Construction ဦးဇော်ဇော်အေး - Peter Bruder - DUHD မှဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသောစီမံကိန်းများ၊ Eco-Green City စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်း၊Tosatis Rodprasert - အသစ် ဖောက်လုပ်မည့် Expressway များအကြောင်းနှင့် ဖြတ်သန်းသွားလာမည့်မြို့များ၊ Economic corridor များနှင့် ဆက်စပ်မြို့များဖွံ့ဖြိုးရေး၊ Development potentials နှင့် trends များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် - DUHD မှ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောစီမံကိန်းများအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီများမှ မည်သို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အိမ်ရာရောင်းချခြင်းစနစ်လုပ်ငန်းများYangon 2040 Master Plan ပါစီမံကိန်းများအကြောင်း၊ ဦးနေလင်းဖြိုး - DUHD မှဆောင်ရွက်နေသည့်4Mega Projects များ၊ New team များတွင် services များပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနည်းလမ်းများ၊ မြို့သစ်စီမံကိန်းများတွင် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားမှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ DUHD website နှင့် ministry of construction website တွင်အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန်အကြံပေးခဲ့ကြောင်း၊ အိမ်ရာတည်ဆောက် ရောင်းချခြင်းသိသင့်သည်များကို ပြောပြအကြံပြုခဲ့ New team များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ရှင်းလင်း အကြံပြုခဲ့ပါသည်။
၁၃။ Ministry of Education မှ Dr. Mya Mya Than နှင့် U Kyaw Khine Linn တို့သည် Zhenteo Corporate Rommakiet Kawatananporn, Chief Representative နှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ တက္ကသိုလ်များ ထူထောင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် မည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊ မည်သို့ လျှောက်ထား ရမည်တို့ကို မေးမြန်းပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် Metallogial Engineering နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြား နေမှုအခြေအနေ၊ ပညာရှင်များ နှစ်စဉ် မွေးထုတ်မှု အခြေအနေ မေးမြန်းပါသည်။
နေပြည်တော်တွင် MANAgement University, LLM တည်ထောင်ရန် မည်သို့ လျှောက်ထားရန် မေးမြန်း
ITပညာရှင်များ IT university များ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ကြားမှု အခြေအနေအား မေးမြန်း
DRI ရှိ ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် တိုင်းတာရနိုင်သည့် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ
University များ accrefitation ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းပုဂ္ဂလိကပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေ၊ မူဝါဒမေးမြန်းTrademark, copy right, industrial design, patent တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်း - Accreditation ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းပါသည်။တက္ကသိုလ်မှာ online registration စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆွေးနွေးလိုပါကြောင်း တင်ပြပါသည်။
၁၄။ Ministry of Planning and Finance မှ Project Bank Information Description ကို ဒေါ်သီတာနွယ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများနှင့် စွမ်းအင်စီမံကိန်းများ ကို စိတ်ဝင်စားကြကြောင်း၊ အချက်အလက်များကို မကြာမှီ အွန်လိုင်းတွင် ကြည့်ရှုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပြီး the best time to invest in Myanmar ဟုပြောပါသည်။
၁၅။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ Trade Promotion ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေး အလားအလာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများကို သိရှိခဲ့သဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့် ကုန်ချောများတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်သွားရေး၊ ပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးတို့အတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် နည်းလမ်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုသိရှိခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင် ရေးကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာရှိ Projects များတွင် မြှုပ်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်လိုကြောင်းပြောကြားပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒများကို ဒေါ်ချိုသက်မူက Joshua Set paing Htet နှင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် Export and Import Procedures များ Retail and Wholesale Notification / Legal advisor ဖြစ်သဖြင့် ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ ပိုမိုအကြံပြုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖိတ်ခေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကို ဦးစိုးအောင်မှ ဦးကျော်သူထက်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးအတွက်တိရိစ္ဆာန်အစာနှင့် lab ပိုင်းဆိုင်ရာ (အစားအသောက်) Test kitများနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်မှုအခြေအနေ/ဓါတ်ခွဲခန်းတည်ဆောက်မှု၆၀% ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ Test kitများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း/ စားသုံးသူ အတွက် ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရေးတို့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက်မှုများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်/ဓါတ်ခွဲခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုလျှင်မြန်ချောမွေ့ရေး ကို ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ Certificate of Origin Online Application system များအကြောင်း၊ Export promotion for Agricultural Products များ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှတင်ပို့လိုပါသဖြင့်အကြံဥာဏ်များ တောင်းခံလာခြင်း အကြောင်း နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးပြည့်မှီရေး ကို ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှ အရည်အသွေးပြည်မှီသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့နိုင်ရန်သုတေသနဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ထုတ်ပိုးပုံနည်းစနစ်များနှင့် label တပ်ဆင်မှုပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အလားအလာများCommodity Testing and Quality Management ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၁၆။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန - အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း မှ ဦးဝင်းအောင် သည် Mr. Yang, Dong Wood, Mr. Kevin M. Murphy တို့နှင့် ဆွေးနွေးရာ လက်ရှိစက်ရုံများတွင်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား (solar system) အသုံးပြု၍ textile product ထုတ်လုပ်ပြီးလျှပ်စစ်ဓါတ်အား off grid အသုံးချနိုင်ရေး၊ သထုံစက်မှုနယ်မြေတွင် eco industrial cluster ထူထောင်ရန်အတွက် Developer အနေဖြင့်ထူထောင်နိုင်ရန် lease (or) PPP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပူးပေါင်းခေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထပ်မံဆက်သွယ်၍ အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းရန်၊ စစ်တောင်းစက္ကူစက်ရုံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးနှင့် သာပေါင်းစက္ကူစက်ရုံများတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ investor /developer များမှလုပ်ငန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စတင်အကာင်အထည်ဖော် နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် investment ratio လုပ်ခွင့်ရမည့်ကာလ (နှစ်ရှည်) ရရှိရန် ဆွေးနွေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုကာလ ကြာမြင့်မှုလျော့ချရေး၊ လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိစက်ရုံ (၁)ရုံချင်းအသေးစိတ် လေ့လာပြီးမှ email contact လုပ်ယူပြီး in detail လာရောက်ဆွေးနွေးရန်၊ SOE စက်ရုံများမှနိုင်ငံတကာကဲ့သို့ Manufacturing လုပ်ငန်းများအား local/foreign investor များဖိတ်ခေါ်၍ privitation (PPP) သို့ soft change သွားရန်၊ Textile Dyeing Finishing, Pulp & Paper manufacturing အတွက်စက်ရုံနှင့် မြေလွတ်များအသုံးချရန်နှင့် Waste Water Treatment အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ညှိနှိုင်းမှုကာလလျော့ချရေး ဆောင်ရွက်ရန် တို့ကိုဆွေးနွေးပါသည်။
Ministry of Industry မှ U Soe Lwin (GM) သည်ဦးမြင့်အေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ transformer များထုတ်လုပ်ရန် စက်ရုံများကို အမှတ်(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန နှင့် အသေးစိတ်လာရောက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် Proposal နှင့် Interest’s form ကို တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ U Than Sat (GM) သည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းနှင့် PPP model ဖြင့် ရေသန့်ဖန်ပုလင်းများ၊ မှန်ချပ်များ ထုတ်လုပ်ရန် ပုသိမ်ရှိစက်ရုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်းနှင့် ဦးကောင်းစည်သူမှ မော်လမြိုင်တွင် ceramic insulator စက်ရုံကို တွဲဘက်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ဦးမျိုးဇာနည်ဝင်း (GM) သည် Mr. Noriyuki Yonemura, President, JMEIC Joint Cooperation နှင့် feasible PPP Scheme အကြောင်းကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ policy, relaxation, incentives စသည့် အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ကြောင်း တင်ပြပါသည်။
၁၇။ Dr. Mathan S. Raia Chairman, Waks Tanil Sangan - India မှ Tourism ကျောင်းသားများကို Internship program အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လုပ်ကိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိကြောင်းပြောကြားပြီး
ဝန်ကြီးဌာနဘက်မှမြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားများအတွက်လည်း Internship program အတွက် ပြန်လည် တောင်းဆိုရာ အဆင်ပြေကြောင်း ပြောကြားပါကြောင်း၊ Ministry of Education ကို တရားဝင် ဆက်သွယ်ရန် ပြောကြားရန်နှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ Hotel and Tourism ဝန်ကြီးဌာနမှ international relation နှင့် project director နှင့် တွေ့ဆုံကြကြောင်း၊ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ထပ်မံဆွေးနွေးရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ လာရောက်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၁၈။ Indonesia Second Secretary Vinsky G. Wattimena- ပုဂံမှ Cambodia ( Angkor Watt) သို့ တိုက်ရိုက် FLIGHT ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်းအပေါ် ပုဂံမှ ဘာလီသို့ လေကြောင်းလိုင်း တိုက်ရိုက်ဆွဲရန် အကြံပြုခြင်းစစ်တမ်းများအရ Indonesia Tourist များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလာနည်းသောကြောင့် ပို၍ အဝင်များလာနိုင်ရန် လေကြောင်းလိုင်း တိုက်ရိုက်ဆွဲရန် အကြံပြုသွားခဲ့ကြောင်း၊ အသေးစိတ် အချက်အလက် များအတွက် ဝန်ကြီးဌာနသို့ လာရောက် ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ email ဖြင့် ဖြစ်စေ လာရောက် ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုခဲ့ပါသည်။
ဝန်ကြီးဌာန၏ ခင်းကျင်းပြသထားသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဆိုင်ရာ ပြသမှုများအနက်မှ လာရောက် စုံစမ်းမေးမြန်းသူ အများစုအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ၏ Tourism sector ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနမှ ခင်းကျင်းပြသဝေငှပေးထားသည့် ၂၀၁၇ခု နှစ်အတွက် tourism statistics data အချက်အလက်များအား စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြကြောင်း၊
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် tourism destination များထဲတွင် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီးရှိ မြိတ်ကျွန်းစုနှင့် ကော့သောင်း အား စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေကြောင်း၊ tourism sector တွင် လာရောက် invest လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ် သော အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေး Myanmar Tourism sector နှင့် ဆိုင်သော အကြောင်း အရာများအား ဝန်ကြီးဌာန၏ website မှ တစ်ဆင့် စုံစမ်းရန် အကြံပြု ဆွေးနွေး ပါသည်။
၁၉။ Khin Khin Myat Thu Hlaing- တက်ရောက်သူမှ Tourism နည်းဥပဒေသစ် ထွက်၊ မထွက် မေးမြန်းရာတွင် တက်ရောက်သူမှ Hotel များတွင် ယစ်မျိုး ဥပဒေအရ အရက်ရောင်းချခွင့် အခြေအနေအား မေးမြန်းရာတွင် တာဝန်ရှိသူမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်း
ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများအတွက် (ဥပမာ-Spa, Casino စသော) ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းHotel များအား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ Star သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ပညာရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ - ဆက်လက်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအား မေးမြန်းစုံစမ်းရန် ဝန်ကြီးဌာန website နှင့် email အား ပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀။ Investment Promotion Company မှ ဒေါက်တာဝဏ္ဏအောင်သည် နိုင်ငံတကာ နှင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာ အိမ်ယာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်း၊ စက်မှုဇုန်တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများအား သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များအား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ follow up လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Investment Myanmar Summit 2019 ကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြပွဲများသို့ တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒများ၏ လက်ရှိအခြေ အနေအားသိရှိနိုင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချင်းချင်း အဆက်အသွယ်များ ချိတ်ဆက်မိနိုင်ခြင်း စသည့် အခွင့် အလမ်းများ ရရှိနိုင်ကြောင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
၂၁။ Myanmar Sugar Development Public Co.,Ltd. ၏ သကြားစက်ရုံစီမံကိန်းမှ ဦးကိုကိုအောင် သည် Rahulm Goenka နှင့် ယခင်ကလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီးယခုအခါ Invest Myanmar Summit 2019 ၌ ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီး အသေးစိတ်ညှိနှိုင်း၍ လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပိုမိုနီးစပ်လာပါကြောင်း၊ ၄င်း Company အနေနှင့် စက်ရုံတည်ဆောက်နေသော Site အတွင်းသို့ ၂ ကြိမ် ရောက်ဖူးပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အလားအလာကောင်းမှန်းသိရှိနေသော Company ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သကြားစက်ရုံသည် အမြတ်အစွန်းများသော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားပြီး၂ဦး၂ဖက် သေချာစွာညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်၍ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝ၂၀ ခုနှစ်၌ သကြားစက်ရုံ စတင်လည်ပတ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းအချိန်မတိုင်မှီ စောလျှင်စွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထားကြောင်း၊ သကြားစက်ရုံလုပ်ငန်းသည် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ဖြစ်သည့်အလျှောက် လုပ်ငန်းသဘာဝအရ မတိမ်ကောနိုင်သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်း၊ စက်မှုသီးနှံ ဖြစ်သည့်အလျောက် စိုက်ပျိုးရေးပါတွဲပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း တို့ပါဝင် ပါသည်။
၂၂။ MPRL E&P - သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်း မှ ဦးစည်သူမိုးမြင့် သည် (Country Manager) Offshore Block A-6 Development Project and Myint& Associates offshore supply base Project သည် အလားအလာရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စီမံကိန်းများ၏ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၃။ MAPCO မှ Biomass Power Plant အတွက် Mr. Peter Witton နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားရန်။ Husk Rired Biomass Power Plant စီမံကိန်းအတွက် Mr. Richard Emersonနှင့် Possible Source of Investors အကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
MAPCO - U Aung Win (MD),နေပြည်တော် MAPCO သည် Yuichi Nitta နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ media coverage အကြောင်းကို အဓိကထား ဆွေးနွေးကြပြီး future coverage for MAPCO's story အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပါသည်။
၂၄။ Myanmar Institute of Governance and Management မှ Institute and Training Services နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းကို ILO မှ ဒေါ်ကြည်ကြည်အေးနှင့် SMEs လုပ်ငန်းများအတွက် သင်တန်းများ အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အချက်အလက်များကို email ပေးပို့သွားရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၅။ Tatlan Construction ၏ Jade Garden City Development project (Amarapura) အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး Jade & Gems Modern Market အကြောင်းဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ရံပုံငွေပိုမိုရရှိရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ဒေါ်သန္တာခိုင်မှ အစိုးရ နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မျှဝေသုံးစွဲမှုများအကြောင်း တင်ပြပြီး ဆက်လက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်လိုသည်များကို အသိပေး ပြောကြားပါသည်။
၂၆။ Maximum Trading Co., Ltd. ၏ Maximum Industrial Park (DRS Industrial Park) မှ ဦးရင်လင်းသည် Money Investment ပိုင်းစိတ်ဝင်စားမှုများပြီးအခြား service များလည်း စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား Investment များသာမက နိုင်ငံသားများကပါ စိတ်ဝင်စားမှုရှိ ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Appointment ချိန်းဆိုမှုများရှိကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော်တွင်တင်ပြဆွေးနွေးရန် ဆောင်ရွက်နေပြီး အခြား ချိန်းဆိုထားသော appointment များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
၂၇။ Sustain Development – Southern Inle Myanmar Development မှ ဒေါ်မေသင်းကြူသည် (1) Reserve (2) Promote နှင့် (3) Participate တို့အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၄) 30 projects showcased at the Ministry of Planning and Finance
Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Bahmo)
Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Pakokku)
Inland port development projects in Ayeyarwaddy River (Magway)
Inland port development project in Chindwin river (Kalewa)
Inland port development project in Chindwin river (Monywa)
Muse-Mandalay New Railway Line Construction Project (Standard Gauge)
Construction of Mrauk Oo Airport
Construction of Thandwe Airport
Developing Vehicle Registration by Radio Frequency Identification (RFID) System
Yangon- Mandalay Expressway
Construction of Yangon Inner Ring
Construction of Yangon Outer Ring
Myitkyina- Tigyaing Expressway
Nay Pyi Taw- Kyauk Phyu Express Way
Eco-green City Development
Ministry of Electricity of Energy
Sale New Fertilizer Plant
New Kyaw Zwa Fertilizer Plant project
New Integrated Refinery and Petrochemical Complex (10 MMTPA) in Thanlyin
Thaukyegat (1) Hydropower Project
Chaung Tha Wind Power Project (30 MW)
TBD / PPP Center
High efficiency gas-based power generation in Yangon region Project
Sustainable and low-cost Hydropower Development
Myanmar Industrial Waste Water Public Private Participation Project (Map)
Construction of Tamu-Kalay-Mandalay_Railway Line__Sample Design _220118
Construction of New Hpa-An Bridge (700 m,4Lanes) __ (Implementing Agency)